Izvo Zvese Nezve Reusable Kodhi? er ... Zvemukati | Martech Zone
Izvo Zvese Nezve Reusable Kodhi? er… Zvemukati
Chitatu, July 15, 2009 China, Gumiguru 29, 2015 Lorraine Bhora
Ini handisi techy! Kwete chaizvo, asi ndinopedza nguva yakawanda ndichitenderedza ma tech wizard, semuenzi wangu, Douglas Karr. Chimwe chezvidzidzo zvakakosha zvandakadzidza kubva kune mumwe wevagadziri vandakashanda navo, yaive kukosha kwekodhi reusable. Nepo mutengi wese achifarira kufunga kuti vakasarudzika, akatsanangura kana iwe uchinge wanyora kodhi kugadzirisa maitiro, vanopfuura mutengi mumwe anozokwanisa kushandisa maitiro nekodhi.
Pfungwa imwecheteyo ye kodhi inoshandiswazve inoshanda kune akawanda akasiyana mamiriro kusanganisira kushambadzira. Kushanda nevaridzi vemabhizinesi madiki vakabatikana avo vanoti havana nguva yekunyora zvinyorwa zvitsva zveblog ravo kana webhusaiti, ini ndinovaratidza mashandisiro ezvinonzwisisika zvekodhi inoshandiswazve. Semuenzaniso: Kuburitswa kwenhau kana maemail anotumirwa achipindura kubvunza kwevatengi kuva matsamba, mablog mablog uye maTweets. Iko hakuna chikonzero chekumisikidza vhiri, kungoitazve izvo zvakanyorwa. Dzimwe nguva kodhi? kana zvemukati zvinoda kushomeka kudiki kune iyo blog kana tsamba yemateereri vateereri, asi kana uchinge waita hwaro zvimwe zvese zviri nyore.
Uye kwandiri, zviri nyore ndiro rakakosha izwi. Kunze kwekunge iwe uri nyanzvi yekunyora kana blogger, izvi zvishandiso, WordPress, Twitter, Plaxo, Friendfeed, zvese nzira kusvika kumagumo. Uye mhedzisiro mhedzisiro ndeyekuti wedzera kufarira mune chako chigadzirwa, sevhisi kana brand. Ndiine icho chinangwa mupfungwa, timu yangu iri kugara iri mukuvhima maturusi matsva ebloggi kurerutsa nekugadzirisa maitiro. Uye zvinoita sekunge mavhiki mashoma ega ega mumwe anotangisa chimwe chinhu chitsva. Parizvino vandinoda ndivo TweetDeck uye TweetLater.
TweetDeck ? Nekuti isu tinogadzirisa zvemukati maakaundi makasitoma maakaundi, ini ndinofarira iyo chokwadi ndinogona kugadzira mapoka evanoshamwaridzana kana kutsika kutsvagirwa kune wega mutengi Iyo nyowani nyowani inondibvumidza kuti ndichinje nyore kubva kumushandisi kuenda kumushandisi kune chaiyo nguva yekudyidzana.
Iyi ndiyo nguva dzose nzira yandinoda yekudyidzana paTwitter, asi ini handigone kuve kwese panguva imwe chete, saka ndinovimba neTweetLater kuti ndirambe ndichioneka pandinenge ndisipo. Ini handishandisi izvi zvakanyanya kumaakaundi angu epaTwitter, asi zvinotyisa kune vatengi senge masangano ekudzidzisa ane zviziviso zvenguva dzose uye zvinyorwa zvekirasi. Kugovera mudzidzi kune iro basa, isu tine maTweets ezuva nezuva akarongwa kusvika pakupera kwaGunyana. Ini ndinogona kusvetuka kana ndiine imwe nguva, asi TweetLater inochengetedza chikamu chepasi chezviitiko kwandiri.
Imwe pfungwa yekupedzisira, zviri nyore kukurirwa nesarudzo dzese. Zano rangu, sarudza mashoma anoshanda, uye uashandise zvakanaka uye iwo anozoburitsa mhedzisiro.
Lorraine Bhora makore makumi maviri muhukama hweAmerica, asati apengenuka. Nhasi, unogona kumuwana pa Roundpeg, kambani diki yekushambadzira, iri muCarmel, Indiana.
Pamwe chete nechikwata chinoshamisa kwazvo (chinosanganisira katsi Benny & Clyde) anogovera zvaanoziva nezvewebhu dhizaini, inbound, social media uye email kushambadzira.
Akazvipira kubatsira kuhupfumi hwezvemabhizimusi muCentral Indiana, Lorraine akatarisana nekubatsira varidzi vemabhizinesi madiki kuti vatonge pamusoro pekutengesa kwavo.
Kubatanidza Nhare muIkunze Kwekushambadzira Strategic
Iro Ramangwana reMafoni Vhidhiyo uye Tsvaga iri Pano!